सिमकोटमा दैनिक २० घण्टा लोडसेडिङ, विद्यार्थी मर्कामा ! - नेपालबहस
सिमकोटमा दैनिक २० घण्टा लोडसेडिङ, विद्यार्थी मर्कामा !
दाने बोहरा: रासस
| १०:४१:०० मा प्रकाशित
२८ फागुन, सिमकोट । हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक २० घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेको छ । विद्युत् मर्मतका लागि बर्सेनि लाखौँ रकम खर्च गरे पनि लोडसेडिङ अन्त्य हुनसकिरहेको छैन । विद्युत् प्राधिकरण कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको चरम लापरवाहीका साथै दक्ष कर्मचारी नहुँदा यहाँका नागरिकले बर्सेनि हिउँदयाममा लोडसेडिङको मार खेप्दै आउनुपरेको छ । एक कार्यालय प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारी सबै स्थानीयवासी भएका कारण मर्मतमा चासो नदिँदा समस्या भएको हो ।
विद्युत्गृहमा पानीको स्रोत कम हुँदा विद्युत् उत्पादन क्षमतामा पनि ह्रास आएको र लोडसेडिङ दैनिकरूपमा बढ्दै गएको विद्युत् प्राधिकरण कार्यालय सिमकोटले जानकारी दिएको छ । हिल्दुम साना जलविद्युत् आयोजनाले दैनिक २० घण्टा लोडसेडिङ गर्दा सिमकोटमा सञ्चालित व्यवसाय धरापमा परेका छन् । विद्युत आपूर्ति नभएपछि फर्निचर, इलेक्ट्रोनिक्सका सबै व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सिमकोटमा यस्ता फर्निचर व्यवसाय सातवटा भएको र लोडसेडिङ बढेपछि ती सबै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको सिमकोटमा इलेक्ट्रोनिक्स पसल सञ्चालन गरिरहेका नन्द सिंहले जानकारी दिए ।
विद्युत् अवरुद्ध हुँदा जिल्ला अस्पताल हुम्लालाई समेत समस्या भएको छ । दिउँसो समयमै विद्युत आपूर्ति नभएर लोडसेडिङ हुँदा विद्युत्को माध्यमबाट हुने काम ठप्प भएको जिल्ला अस्पताल हुम्लाका सिनियर अनमी सरिता बोहराले जानकारी दिए । यस्तै सदरमुकाम सिमकोटमा सञ्चालित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई काम गर्नसमेत समस्या बनाएको छ ।
हिल्दुम साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युतगृह लागि पानीको स्रोत कम हुँदा दैनिक लोडसेडिङ समय बढिरहेको वितरण केन्द्रका प्रमुख साजन ऐडीले बताए । उनले भने, “५०० किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाबाट हाल १४० देखि १५० किलोवाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । यसले झन् समस्या परेको हो ।” वितरण केन्द्रले सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका एक हजार ८०० सेवाग्राहीलाई दैनिक एक मेगावाट विद्युत वितरण गर्नुपर्नेमा उत्पादनकै कमीले गर्दा लोडसेडिङ गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
पानीको स्रोत कम भएपछि आयोजना नजिकको लाङ्दुखोलाबाट पानी ल्याएर मूल नहरमा मिसाउने कामका लागि बोलपत्र भएको तर काममा ढिलाइ भएका कारण पनि समस्या आएको उनले बताए । केन्द्रले निर्माण व्यवसायीलाई छिटो पानी ल्याएर मूल नहरमा मिसाउने काम गर्न ताकेता गरिसकेको प्रमुख ऐडीले बताए ।
पानी अपुग हुने भएर वितरण केन्द्रले विद्युतगृह दुईवटा स्टक पानीट््याङकी बनाए पनि यसको प्रयोग आउन सकिरहेको छैन । ठेकेदारले बर्सेनि मर्मतका नाममा आफूले पैसा लिन पाउने भएका कारण पनि यस्तो समस्या आउने गरेको हो । ठेकेदारले मर्मतका नाममा बर्सेनि पैसा खान पाउने भएपछि समयमै मर्मत गर्न नसकेको एक स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
आज पनि उपत्यकाका केही ठाउँमा लोडसेडिङ हुने ३ महिना पहिले
सिमकोटमा दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ, एसइई तयारी गरिरहेका विद्यार्थी निराशा ४ महिना पहिले
सरकार जस लिन खोज्ने,अपजस नलिने फट्याइँ नगरौं : नेता गुरुङ ४ महिना पहिले
जाडोयाममा बिना जानकारी किन जान्छ झ्याप्प-झ्याप्प बिजुली ? ४ महिना पहिले
अयोध्यातर्फ लगिँदै राम–सीता मूर्तिसहितको रथयात्रा ११ घण्टा पहिले
साधनास्थलको रुपमा विकास हुँदै हरिहर गुफा सन्यास आश्रम ७ दिन पहिले
लागु औषध सेवन गरी झगडा गर्ने ५ पक्राउ ३ दिन पहिले
इच्छाकामनाको करिब साढे २०० घरधुरीमा बिजुली बले २ दिन पहिले
एनआइसी एसिया बैंकको स्वामित्वमा रहेका शेयर लिलामीमा, शेयरमूल्य कति ? २ दिन पहिले
देशभर ७६७ किमी क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर जडान ४ हप्ता पहिले
निशाकाे ओ प्रियामा पुजा र आकाश २ हप्ता पहिले
हतौडा प्रहारबाट १५ वर्षीय बालकको हत्या, एकजना पक्राउ ३ दिन पहिले
टर्कीको अर्थतन्त्रलाई सखाप पारिदिने राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी २ वर्ष पहिले
बिरामी बोकेर हिडेको जीप ओखलढुङ्गामा दुर्घटना, एकको मृत्यु, तीन घाइते १ वर्ष पहिले
प्रदेश ३ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाखको बजेट [पुर्णपाठ] २ वर्ष पहिले